Sustainability - BXL Yakagadzira Packaging
Yakachengetedzwa Packaging Nhasi uye Mangwana
Zvinoenderana neIBM yekutsvagisa nzwisiso, kusimudzira kwasvika panogumira. Sevatengi pavanowedzera kukumbundira zvemagariro zvikonzero, ivo vanotsvaga zvigadzirwa uye zvigadzirwa zvinoenderana nemitemo yavo. Vanoda kusvika vatanhatu muvane gumi vatengi vakaongororwa vanoda kuchinja maitiro avo ekutenga kuti vadzikise kukanganisa kwezvakatipoteredza. Vanoda kusvika vasere pagumi vakapindura vanoratidza kuenderera kwakakosha kwavari.
Kune avo vanoti zvakanyanyisa / zvakanyanya kukosha, pamusoro pe70% vangabhadhara mubhadharo we35%, paavhareji, yezvikwata zvinotsigirana uye zvine chekuita nharaunda.
Sustainability yakakosha pasirese. BXL Kugadzira inotora basa rayo kupa vatengi vepasirese eco-hushamwari kupakira mhinduro uye inobatsira kune yepasi rese kusimudzira chikonzero.
Kana hunyanzvi hwakabatanidzwa neye eco package mhinduro. BXL Yakagadzira yakahwina Mubairo Wakanakisisa weKuratidzira mumakwikwi eMobius neHuanghelou's package dhizaini.
Mune ino pasuru yekugadzira, BXL inoshandisa eco bepa & pepa rebhodhi kuvaka inesimba bhokisi chimiro, uye inosanganisa iyo ne graphic dhizaini kutevedzera chivakwa chitarisiko cheHuanghelou. Iyo yese package dhizaini inounza BXL Creative's eco kuchengetedzwa uye nemagariro mutoro, nepo panguva imwecheteyo, ichiendesa runako rwehunyanzvi.
Yakaumbwa pulp kurongedza, inonziwo yakaumbwa fiber, inogona kushandiswa seye fiber tireyi kana faibha midziyo, inova eco yekupaka mhinduro, sezvo yakagadzirwa kubva kwakasiyana-siyana fiber, senge yakadzokororwa bepa, kadhibhodhi kana imwe yakasikwa tambo (senge nzimbe, bamboo , uswa hwegorosi), uye inogona kudzokororwazve mushure mekushandisa kwayo kwehupenyu-kutenderera.
Kukosha kuri kukura kwekusimudzira kwepasirese kwakabatsira kugadzira pulp kurongedza mhinduro inokwezva, sezvo ichigona kuora nyangwe isina ivhu kana kurasisa nzvimbo kugadzirisa.
Kugara Mukubatana neMasikirwo
Iyi dhizaini dhizaini zvakare yakavakirwa pane eco pfungwa. Yakagadzirirwa yeChina inonyanya kuzivikanwa eco mupunga brand Wuchang Rice.
Iyo pasuru yese inoshandisa eco bepa kuputira iwo mupunga cubes uye kupurinda pamwe nemuno mhuka mhuka mhuka kuendesa iwo meseji kuti iyo mhando inotarisira hupenyu hwemusango uye zvakasikwa nharaunda. Yekunze package bhegi zvakare yakavakirwa pane eco kunetsekana, iyo inogadzirwa nekotoni uye inogadziriswazve sebhegi yebento.
Mumwe muenzaniso wakaringana kuratidza izvo zvinunurwa nepakeji, kana hunyanzvi hwakabatanidzwa neye eco package mhinduro.
BXL Inogadzira iyi pasuru dhizaini inoshandisa zvakakwana eco mapepa echinhu chete, kubva kubhokisi rekunze kuenda kune yemukati tireyi. Iyo tireyi iri kuunganidzwa nematanda emarata emapepa, ichipa chengetedzo izere kune iro bhodhoro rewaini panguva ipi neipi yakaoma yekufambisa.
Uye bhokisi rekunze rakadhindwa ne "Iyo Inonyangarika Tibetan Antelope" kuendesa meseji kunzanga kuti mhuka dzesango dziri kutsakatika. Tinofanira kutora matanho izvozvi uye kuita zvinhu zvakanaka kune zvakasikwa.